नाडा अटो शो २०१९ : विद्युतीय सवारीसाधनको उत्साहजनक प्रदर्शनी हुँदै
काठमाडौं । यस वर्षको नाडा अटो शो आगामी भदौ १० देखि १४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदै छ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आयोजना गर्ने उक्त मेलामा यसपटक विद्युतीय सवारीसाधनको उत्साहजनक प्रदर्शनी हुने भएको छ ।
अघिल्लो संस्करणको प्रदर्शनीभन्दा केही पृथक् बनाउन यस वर्ष प्रदर्शनी स्थल विस्तारका साथै अवलोकनकर्ताका लागि आकाशे पुल निर्माण गर्न लागिएको एशोसिएशनले बताएको छ । यसपटकको मेलामा बैंक तथा वित्त कम्पनीको समेत सहभागिता रहनेछ । ‘अटो शोमा अवलोकनकर्ता र सहभागीको सहजताका भृकुटीमण्डपको उद्यानसमेत उपयोग गर्नेछौं,’ एशोसिएशनका सचिव तथा अटो शोका प्रचार प्रसार विभाग संयोजक अनुप बरालले भने, ‘यस वर्ष विद्युतीय सवारीसाधनको सहभागिता बढ्नेछ ।’ केही कम्पनीले प्रदर्शनीमा राखिने विद्युतीय सवारीको नाम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसको संख्या अझै थपिने आयोजकको ठम्याइ छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल आयातमा टीआर यथावत् राखेपछि गाडी विक्रेता कम्पनीहरू मेलामा केही नयाँ प्रदर्शन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । वस्तु विक्री भएपछि ऋण भुक्तानी गर्ने प्रतिज्ञापत्रका आधारमा बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा ट्रस्ट रिसिट लोन हो । गाडी आयातकर्ताले ९० प्रतिशतसम्म टीआर पाउने गरेका छन् । असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ पारित गर्दै सवारीसाधनको आयातमा ऋण नदिने निर्णय कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेको थियो । तर मौद्रिक नीतिले यसलाई यथावत् राखेको छ ।
मेलामा प्रदर्शनी हुने केही विद्युतीय सवारीसाधन
चिनियाँ कम्पनी दायले उत्पादन गरेको विद्युतीय गाडी ‘दाय’ दिगो ग्रूपअन्तर्गतको फ्युचर ड्रिम इनर्जीले नेपाली बजारमा ल्याएको हो । एकपटकको चार्जमा १ सयदेखि १५० किलोमिटरसम्म चल्ने दाबी गरिएको यो कार रू. २ लाख ८० हजार डाउनपेमेन्टमा किन्न सकिने कम्पनीले बताएको छ ।
बिवाईडी एम ३
चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी बिवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिमेक्स इंक पनि यस वर्षको नाडा अटो शोमा सहभागी हुने भएको छ । उक्त कम्पनीले बीवाईडी एम ३ गाडी प्रदर्शनीमा राख्ने भएको छ । ७ सीट र ५ सीट क्षमताको उक्त गाडी एकपटकको चार्जमा ३५० किलोमिटर कुद्ने कम्पनीका यमुना श्रेष्ठले बताइन् । ‘५ सीट क्षमताको गाडीको मूल्य ५२ लाख र ७ सीट क्षमताको गाडीको मूल्य ६६ लाख छ,’ उनले भनिन्, ‘अटो शोमा प्रदर्शन हुनु अगाडि नै यो गाडी १०० ओटा बुकिङ भएको छ ।’
नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नाडा अटो शोमा ‘कोना ईभी’ प्रदर्शन गर्ने भएको छ । गतवर्षको मेलामा कम्पनीले आयोनिक प्रदर्शन गरेको थियो । यसअघि नै यो गाडी १५० ओटा विक्री भइसकेको कम्पनीले बताएको छ । यो गाडीको रेगुलर सिरिजको मूल्य ५५ लाख ९६ हजार र लङरेन्ज सिरिजको मूल्य ६५ हजार ९६ रहेको कम्पनीका सिनियर मार्केटिङ म्यानेजर अवाशिष ओझाले बताए ।
नेपालका लागि कियाको आधिकारिक विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिले अटोशोमा ‘निरो’ प्रदर्शन गर्दै छ । केही समयअघि सार्वजनिक भएको यो विद्युतीय गाडी ७५ ओटा विक्री भइसकेको कम्पनीका विक्री प्रबन्धक विवेक लेकालीले बताए । यसको मूल्य रू. ६६ लाख ९९ हजार रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालका लागि टाटाको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले अटो शोमा विद्युतीय गाडी ‘टाटा टिगोर’ प्रदर्शन गर्ने भएको छ । कम्पनीले नेपालमा यस गाडीको विक्री शुरू गरेको छैन । टाटा टिगोर नयाँ अपग्रेडका साथ आउन लागेको कम्पनीका डेपुटी म्यानेजर नवराज निरौलाले बताए । यद्यपि अटो शोअगाडि टाटाले उपलब्ध गराए मात्र यो गाडी प्रदर्शनीमा राख्ने सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपालका लागि एमजीको आधिकारिक विक्रेता पारामाउन्ड मोटर्सले एमजीको विद्युतीय गाडी ‘एमजी जेडएस नाडा अटो शोमा प्रदर्शनीको तयारी गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी एमजी मोटर्सले उत्पादन गरेको उक्त विद्युतीय सवारी मेलामा प्रदर्शन गर्न लागिएको कम्पनीले बताएको छ । बुकिङ शुरू भइसकेको यो गाडीको मूल्य रू. ४९ लाख ९९ हजार रहेको जानकारी दिइएको छ । नाडा अटो शोमा यी गाडीसँगै विद्युतीय स्कुटर पनि प्रदर्शनी गरिने विक्रेताहरूले बताएका छन् । केही कम्पनीले विद्युतीय मोटरसाइकल पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।